Izindaba - Bezzia | Bezzia
I-Actualidad yisigaba esigxile ehoreni lokugcina le- abadumile, imicimbi namaphathi, kanye nezokungcebeleka namasiko. Kuzoqukatha zonke izindaba ezihlobene nosaziwayo nezimpilo zabo zomphakathi nezangasese: ukuzalwa, imishado, ukuhlukaniswa, amadili, amaqembu ezizimele, ama-award galas, izindaba ezimayelana nohambo, amabhayisikobho, ukwethulwa kwezincwadi noma imicimbi eyahlukahlukene.
Ngaphezu kokuthola ulwazi olusha emhlabeni obomvana, sifuna futhi ukumboza zonke lezo zihloko ezihlobene nalo. ezokungcebeleka namasiko, ukuze sinikeze uhlu oluphelele lwemisebenzi yamasiko nezokuzijabulisa yabesifazane.
Lapha ungathola ihora lokugcina lezimpilo zamamodeli, abaculi nabadlali bebhola, kanye nokukhishwa kwaseshashalazini kwakamuva noma ukukhishwa kwe-albhamu yakamuva kaDavid Bisbal. Ngaphezu kwalokho, sifuna ukuveza izindaba zamanje ngombono omusha, sibambe izitayela emhlabeni wethelevishini, osaziwayo noma ezincwadini.
Amafilimu aseSpain azokhishwa ngo-Okthoba ozayo
Kuzoba namafilimu amaningi aseSpain azokhishwa ngo-Okthoba ozayo ema-cinema ethu. Eziningi zazo ...
Ama-premieres ka-Okthoba ongawabona kuNetflix
Mhlawumbe ngoba kungenye yamapulatifomu ahlala njalo ebonga inani lama-premieres analo ...
Ngale ndlela kwethulwa umagazini wama-69 weSan Sebastian Festival
Kusasa kuzovulwa uhlelo lwama-69 lweSan Sebastián Festival. Kuze kube ngoSepthemba 25, eyodwa ...
Kunochungechunge oluningi oluvela kuzingxenyekazi. Ama-premieres awagcini ukwenzeka nokuningi manje, nge ...
Ekwindla yisizini ekumema ukuthi ufunde. Ngemuva kokuphila okumatasa komphakathi kanye nobuthakathaka ...
Isitolimende esisha se-'La Casa de Papel 5 'sesivele sikhishiwe. Isizini entsha ehlukaniswe ...
Ama-albhamu angama-6 ungalalela futhi uthenge ngoSepthemba
Njengenyanga ngayinye sinikela isonto lokuqala ukuthola amarekhodi esingakwazi ukuwalalela kuphela kepha futhi sithenge lokhu ...
'Jaguar': Uchungechunge olusha lwaseSpain oluza kuNetflix
Kubukeka sengathi ipulatifomu yeNetflix iyaqhubeka nokuba ngesinye sezinhlaka ezihlonishwa kakhulu zedlalade lochungechunge….
Kunabaningi bethu namuhla abanaka umqondo wokusimama emhlabeni wezemfashini. Umqondo oyinkimbinkimbi ...
Ukuqala kwamafilimu ngoSepthemba ozayo
USepthemba yinyanga esihlangana ngayo nokubuyela esimisweni. Imbuyiselo ebandakanya ukuqala kabusha imikhuba ngesikhathi ...
'Esikhathini esihle kakhulu': Impumelelo yeNetflix
Kuyiqiniso ukuthi ngokwama-movie nochungechunge, iNetflix ingelinye lamapulatifomu amahle ahlala anakho konke ...